नया साल मुबारक - NYE काउन्टीडाउन डीजे, वीजे, नाइट क्लबहरु 2020
घर / Specials Products / Happy New Year
यो उच्च ऊर्जा VJ ड्रपले नयाँ वर्षमा ल्याउन मद्दत गर्दछ! 12 घडी स्ट्राइक पहिले हुप निर्माण गर्न सही छ। सबै पेशेवर आवाज र उत्पादन गरी, ग्राफिक्स संग साथ। बल नलगाउनुहोस्, प्रचार बनाउनुहोस्। यो वर्ष यो प्रमुख VJ ड्रपहरूको साथ गर्नुहोस्!
SKU: VJ ड्रप - नयाँ वर्ष मुबारक श्रेणी: Specials Products